Hlala kwivilla edumileyo eSunne
I-Villa kwi-architecture ye-50 ene-3 yokulala. Indawo entle kufutshane nolwandle ngasechibini, ipaki yamanzi kunye neendawo zokutyela. Ungahamba apha ngololiwe kwaye isitishi sikuhambo olufutshane ukusuka endlwini. Ndinayo ibhayisekile onokuthi uyiboleke ngexesha lokuhlala kwakho.
Idolophu yaseSunne inokubonelela okuninzi, indawo yokuphumla yeSki Sunne ine-skiing ezantsi ukusuka kulwaphulo-mthetho kude kube yi-Easter. I-Sunne Spa ibonelela ngejimu kunye nokuphumla, i-Spa ifumene ibhaso njengeyona spa ibalaseleyo eSweden. Indawo yokutyibiliza ekhephini yimizuzu eli-10 yokuqhuba i-spa kumgama omfutshane ukusuka endlwini.
IMårbacka indawo yesikhumbuzo kaSelma Lagerlöf, iRottneros Park kunye neVästanå Theatre ekufutshane zizinto ezinomtsalane ezimangalisayo ngexesha lasehlotyeni. I-Sunne ikwabonelela ngeegalari, iindawo zokutyela, iindlela zeenyawo, ii-cyklepaths, ibala legalufa, ukuqubha echibini kunye neminye imisebenzi.
4.82 · Izimvo eziyi-90
Ungalibazisi ukundicela uncedo okanye ulwazi.